Stereokit: Yakasanganiswa Reality Raibhurari Inowedzera Linux Tsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Stereokit: Yakasanganiswa Reality Raibhurari Inowedzera Linux Tsigiro
Technologies chaiyo chaiyo, yakawedzera chokwadi uye yakavhenganiswa chokwadi vari kuwedzera kukosha. Aya matekinoroji achave aripo mune yakawanda zvikamu, kwete chete mumitambo yemavhidhiyo, asiwo nenzira iyo ichaumbwa mune ramangwana, mune yekushanya chikamu, nezvimwe Naizvozvo, zvakakosha kuti Linux haina kusiiwa nerudzi urwu rwehunyanzvi, ndosaka idzi nhau nezve rutsigiro rweStereoKit dzakakosha kwazvo.
Linux yakatanga zvishoma kumashure, ine zvigadzirwa zvakawanda zvekutengesa vanofuratira papuratifomu, vachitarisa zvakanyanya paWindows. Kutenda nekuyedza kwenharaunda, Valve, Collabora, nevamwe, zvishoma nezvishoma izvo zviri kudzoserwa. Iyo XR (VR / AR) nzvimbo inoenderera ichichinja pamwe neakavhurika sosi mapurojekiti neLinux rutsigiro.
Kune avo vamusingazive neStereoKit, iri yakasanganiswa chaiyo raibhurari Vhura sosi iyo inobvumidza nyore kuitiswa kwezvikumbiro zveHoloLens uye VR neC # uye uchishandisa iyo OpenXR API. Iyo yakafuridzirwa nemaraibhurari akadai seXNA uye Kugadziriswa, ichibvumira kuumbwa kwehunyanzvi uye bhizinesi-rakagadzirira software.
StereoKit v0.3 yakabuda mukupera kwaKukadzi uye ikawedzera nyowani yemifananidzo API. Iyo yekuvandudza yakatotaura kuti yaizomhanya pane ese akakosha mapuratifomu senge webhu, Windows, Android, uye zvakare paGNU / Linux. Ikozvino inoenderera mberi nekufambira mberi uye inofambira mberi nekugadziriswa, ichiwedzera maficha nyowani uye zvinowedzera, pamwe nekunatsiridza rutsigiro rwayo pamapuratifomu.
Zvemashoko ako, kumwe kwekuvandudza izvo zvakawedzerwa neino yazvino kuvandudza kuStereoKit ndeaya:
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemapuratifomu akakodzera seOculus Desktop, Windows Mixed Reality, Oculus Quest, uye HoloLens 2, pamwe neMonado Linux, SteamVR, uye nemunhu wese anoshandisa OpenXR.
Flat screen mode pamwe nekuisa emulation yekuvandudza kuri nyore.
Kugadzirwa kwemaapps mumasekondi, uye kwete mumaminetsi sepakutanga.
Kunatsiridzwa mune zvakasanganiswa zvechokwadi zvinopinda.
Zvirinani uye zviri nyore mushandisi interface uye kudyidzana.
Tsigiro iri nani yemafomati emhando: .gltf, .glb, .fbx (zvishoma), .obj, .stl, maitiro. Zvakare zvemavara mafomati: .jpg, .png, .tga, .bmp, .psd, .gif, .hdr, .pic, equirectangular cubemap, maitiro.
Yakawedzera nguva yekumhanya faira kurodha.
Dzosera pombi yakasimbiswa nekutadza.
Shading system uye inoshanduka zvinhu zvine integrated PBR.
Zvinyorwa zvinogadzirwa kubva kunobva kodhi, kusanganisira skrini.
Mamwe mashoko - Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Stereokit: Yakasanganiswa Reality Raibhurari Inowedzera Linux Tsigiro
Mabhodhoro anovavarira kurerutsa basa rekumhanyisa Windows app paLinux
Hydrogen, multiplatform uye nyore kushandisa dhiramu muchina